The Ab Presents Nepal » सलिकराम पुडासैनीको मृ…त्यु रबिलाइ जोड्नु नियोजित : हामिले कुनै रेकर्डिङ अडियो फेला पारेका छैनौ : एसपी मल्ल
काठमाडौं -: चितवनको नारायणगढस्थित कंगारु होटलमा मृ..त भेटिएका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको साथमा भेटिएको भनिएको अडियो रेकर्डका बारे चितवन प्रहरीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ । पहिले न्युज २४ को कार्यक्रम सीधा कुरामा काम गरेका पत्रकार पुडासैनीलाई कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले मान.सिक या.तना दिएको भन्ने विषयमा विभिन्न अनलाइनले लेखेका समाचार भाइरल हुन थालेपछि नेपालआजले चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लसँग यसबारे कुराकानी गरेको छ ।
पत्रकार पुडासैनी मृ..त्यु प्रकरणबाट बोल्नै नमानेका एसपी मल्लले अलिकति कुरा भने खोलेका छन् । उनले पत्रकार पुडासैनीको साथमा भेटिएको मोबाइल स्वीच अफ भएको अवस्थामा थियो । त्यसलाई चार्ज गरेर आफूहरुले खोलेको जानकारी दिए । उनीसँग टेलिफोनमा भएको छोटो कुराकानी जस्ताको त्यस्तैः
रवि लामिछानेले या.तना दिएका कारण आफूले आ.त्म..ह..त्या गरेको भन्ने पत्रकार पुडासैनीको अडियो रेकर्ड छ भनेर समाचारहरु आउन थालेका छन् । के त्यस्तो अडियो मृ..तक पत्रकारको साथमा भेटिएको छ ?
के भेटिएको छ, के छैन भन्ने कुरा अहिले भन्न मिल्दैन । किनभने हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं । उनको मृ..त्यु बारे अनुसन्धानकै क्रममा शव पोष्ट मार्टमका लागि पठाएका छौं । ह.त्या वा आ..त्मह..त्या त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ । त्यो रिपोर्ट आएपछि कसैलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्ने भयो भने त्यसपछि नै भन्न सक्छौं ।
अडियो रेकर्ड भेटिएको हो कि होइन ? त्यसमा रवि लामिछानेको पनि प्रशंग छ कि छैन ? –अडियो मात्रै होइन, सबै कुरा भेटिएको छ नी । तर अनुसन्धानमा भएकोले भन्न मिल्दैन ।
के अडियो रेकर्ड मोबाइलमै थियो ?- अब होला थाहा छैन । त्यो अडियो रेकर्ड सुन्ने मान्छेहरुले भनेको आधारमा समाचारहरु बन्न थालेका छन् नी त ?हामीले कुनै पनि कुरा कसैलाई दिएका छैनौं । जसले ‘अडियो रेकर्ड सुनेको छु भन्छ उसैलाई सोध्नु पर्यो । त्यस्तो सुन्ने मान्छेले हामीलाई पनि त्यो अडियो रेकर्ड उपलब्ध गराइदिए अनुसन्धानमा सजिलो हुन्थ्यो ।
सु..सा इड नोट छ ?